Ubuntu, fantaro ny zava-drehetra momba ity rafitra fiasa maimaimpoana miorina amin'ny Linux | Ubunlog (Pejy 14)
Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus dia efa manana sary isan'andro ho an'ireo mpampiasa sahy indrindra hanandrana ny OS, ary efa fantatray ny daty famoahana farany azy
Mametraka Ubuntu MATE 15.10, torolàlana fametrahana ary dingana voalohany
Torolalana izay asehonay aminao ny fomba fametrahana sy fikirakirana ireo dingana voalohany amin'ny kinova farany an'ny Ubuntu MATE 15.10.
LuckyBackup, ny backup anao dia tsy dia tsotra loatra
Ity fitaovana miorina amin'ny rsync ity dia ahafahantsika manao backup eo an-toerana na lavitra amin'ny fomba tena tsotra ary raha irintsika, miaraka amin'ny safidy mandroso maro.
Ny navigateur Ubuntu, ny fanoloana an'i Mozilla Firefox?
Ny resabe naterak'i Mozilla Firefox amin'ny maha-mpizahatany default azy dia nampisongadina indray ny browser an'ny Ubuntu.
Alien: nahemotra amin'ny andro famotsorana ny fitokanana ho an'ny Linux
Alien: Tsy hivoaka amin'ny farany ny fitokana-monina ho an'ny Linux raha antenaina. Toa olana iray amin'ny AMD no mahatonga ny fahatarana amin'ny fahatongavan'ny lalao amin'ny Linux.
(Nohavaozina) Marina ve fa tsy misy viriosy ao amin'ny GNU / Linux?
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava izay antony lehibe mahatonga ny tsy fisian'ny viriosy ao amin'ny Linux ary raha amin'ny Operating Systems hafa toy ny Windows.
Ubuntu Kylin dia miteraka fahatsapana any Shina
Ubuntu Kylin dia kinovan'ny OS an'ny Canonical mikendry ny tsena sinoa. 40% ny tsena Dell ao Shina dia anao, mahazo toerana na Windows aza.
Ahoana ny fomba hananana ny kinova Mozilla Firefox farany amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fananana ny kinova Mozilla Firefox farany ao amin'ny Ubuntu aorian'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy, nefa tsy niandry ny hisehoany tao Ubuntu.
Ubuntu dia mamoaka horonantsary miaraka amin'ny Mir and Unity 8 vaovao
Ny ekipan'ny Ubuntu dia nanolotra horonan-tsary misy ny vaovao ao amin'ny Unity 8 sy Mir, mampiseho izay misy ifandraisany amin'ny firaisana
Xenlism, fonosana kanto ho an'ny Ubuntu
Xenlism dia fonosana ikambana miloko sy miloko amin'ny fanaingoana ny Ubuntu. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manome anao izay ilainao hametahana sy hankafizinao azy.
Ahoana ny fomba hamafana ny tahiry PPA ao Ubuntu
Rehefa maro ny programa voangona dia afaka manana lisitry ny tahiry be dia be isika. Noho izany ity tutorial ity izay milaza ny fomba hamafana ny tahiry PPA.
Ahoana no fiasan'ny fahazoan-dàlana rakitra sy lahatahiry ao Linux (III)
Mitohy amin'ny tutorial-nay, ho hitantsika ny fomba fanovana ny fahazoan-dàlana rakitra sy lahatahiry ao amin'ny Linux, ary ny fomba fanaovan-javatra mitovy amin'izany amin'ny tompona fisie.
Tena tsara kokoa noho ny Windows 10 ho an'ny orinasa ve i Ubuntu? Amin'ny Canonical dia manazava ny antony izy ireo
Ubuntu no safidy tsara indrindra azo atao amin'ny Windows 10, na mino izany i Canonical. Efa nanome ny antony izahay, dia ho fantatray izao ny anao.
Arc Theme, lohahevitra vaovao ho an'ny fikandranao amin'ny Ubuntu
Arc Theme dia lohahevitra namboarina ho an'ny mpitantana fikandrana Ubuntu. Izy io dia mifanaraka amin'ny birao misy ny GTK, ary lazainay aminao ny fomba fametrahana azy
Midori, navigateur maivana maivana izay efa matotra
Midori dia iray amin'ireo mpizaha maivana maivana indrindra izay ao anatin'ny kinova farany izay dia nahitana ny fanohanana ny Flash, ny add-on toa ny Ad-block sy ny mpamaky fahana.
Shotcut, mpamoaka horonantsary mahatalanjona
Shotcut dia programa fanovana horonantsary maimaimpoana maimaimpoana izay multiplatform ary mamela ny fanovana horonan-tsary miaraka amin'ny vahaolana 4K ary koa ny sivana.
Ahoana ny fametrahana KVM amin'ny Ubuntu
KVM dia iray amin'ireo safidy hafa azontsika ampiasaina amin'ny virtualization amin'ny tontolon'ny Linux, ary eto dia hitantsika ny fomba fametrahana azy ary manomboka mampiasa azy.
Xfce Panel Switch, fitaovana vaovao ho an'ny Xubuntu 15.10
Xfce Panel Switch dia fitaovana vaovao hananan'ny Xubuntu 15.10 ary izany dia hanao kopia backup an'ny fikirakiran'ny takelaka Xubuntu.
Ahoana ny fampifanarahana ny rakitrao amin'ny Google Drive ao amin'ny Ubuntu
Grive dia mpanjifa openource an'ny Google Drive ho an'ny Ubuntu izay ahafahan'ny mpampiasa manana fampiasa mitovy amin'ny an'ny mpanjifa ofisialy. Andramo io
Safidy mahaliana 3 ho an'ny Minecraft ho an'ny Ubuntu
Minecraft dia iray amin'ireo lalao malaza indrindra tato ho ato. Na izany aza, aloa izany. Manolotra safidy Minecraft telo maimaim-poana izahay.
Ahoana ny fomba hisehoan'ny thumbnails amin'ny antontan-taratasinao
Fampianarana kely momba ny fomba hanehoana ny sary kely thumbnails an'ny rakitra LibreOffice ary andao jerena ny atiny nefa tsy mila manokatra ny antontan-taratasy.
Tsy mbola nanana fotoana tsara toa an'io ny Ubuntu handresy an'i Windows
Andro vitsy lasa izay tao Ubunlog dia niresaka momba ny hoe tsara kokoa ve ny Ubuntu na ny Windows 10. Androany dia arosonay fa raha te handroso ianao dia mila manao izany haingana.
Mycroft, faharanitan-tsaina artifisialy noho ny Snappy Ubuntu Core
Mycroft dia sampam-pitsikilovana artifisialy izay mampiasa Snappy Ubuntu Core ho toy ny rafitra fiasa ao aminy ary koa fitaovana enti-miasa malalaka hampandehanana sy hifandraisana.
Efa misy mpamily ofisialy NVIDIA PPA
Ny mpamily NVIDIA PPA tazomin'ny mpikambana Canonical dia ofisialy izao. Amin'ity lahatsoratra ity dia homenay anao ny trano fitehirizana sy ny torolàlana hapetraka.
Manana olana amin'ny fametrahana Spotify amin'ny Ubuntu ve ianao? omenay anao ny vahaolana
Spotify no mpilalao mavesatra indrindra manerantany amin'izao fotoana izao. Ankehitriny dia mila manavao ny taratasy fanamarinana azo antoka amin'ny Linux ianao.
Ubuntu te hanampy anao hametraka ireo mpamily NVIDIA
Ny NVIDIA Drivers dia narary an-doha tamin'ny mpampiasa Linux nandritra ny fotoana elaela. Ankehitriny i Ubuntu dia te-hanatsotra ny fametrahana azy matetika.
Ahoana ny fametrahana mpamily NVIDIA tompony
Ny fametrahana ny mpamily NVIDIA tompony dia mora ihany ary amin'ity torolàlana ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana izany amin'ny fomba mahomby.
Ahoana no ahafantarako raha mifanaraka amin'ny Ubuntu ny solosainako?
Fampianarana kely momba ny fomba hahafantarana raha mifanaraka amin'ny Ubuntu na tsia ny fitaovantsika na ny solo-sainantsika, na raha manana olana amin'ireo singa mikirakira fitaovana izahay.
Ubuntu 15.04 vs Windows 10 iza no rafitra tsara kokoa?
Windows 10 dia efa eny an-dalambe ary tsy azo ihodivirana ny fampitahana ny Ubuntu 15.04. Na dia hafahafa aza izany, Windows 10 dia mbola tsy tonga ao amin'ny Ubuntu amin'ny lafiny sasany
Ahoana ny fametrahana ny mpanjifa manokanaCloud amin'ny Ubuntu
Ny fametrahana ny client-nao manokanaCloud amin'ny solosaintsika dia tsy mitaky afa-tsy dingana vitsivitsy, aorian'izay isika dia afaka miditra amin'ny fisie.
Tsy hanana ny Ubuntu Software Center ny Ubuntu MATE
Ubuntu MATE dia tsy hanana ny Ubuntu Software Center, fipoahana an'ohatra amin'ny fizarana, izao izy dia mitady vahaolana mahomby sy miasa.
Plasma Mobile, andiany mifaninana amin'ny Ubuntu Touch
Plasma Mobile no anaran'ny rafitra fiasa vaovao natolotry ny Project KDE ary hiasa izay fampiharana avy amin'ny rafitra hafa.
PlayDeb, ilay tahiry namboarina hilalaovana amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana PlayDeb, toerana fitahirizana misy lalao maro sy rindranasa mifandraika izay tsy tafiditra ao amin'ny trano fitahirizana ofisialy.
Scid, fitaovana tsara hianarana hilalao échec
Scid dia angona tahiry chess izay tsy vitan'ny mitahiry kilalao échec fotsiny fa miasa ho fitaovana hianarana lalao chess.
Diovy amin'ny Ubuntu Tweak ny Ubuntu
Ubuntu Tweak dia fitaovana lehibe hanadiovana ny sisanay Ubuntu tavela amin'ireo programa napetrakao amin'ny rafitray izay tsy
Ahoana ny fametrahana indray ao amin'ny tontolon'ny sary Ubuntu raha tsy hampidirina ny birao
Asehonay aminao ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny tontolon'ny sary Ubuntu rehefa tsy mavesatra ny fivoriana ary tsy afaka manao zavatra hafa ankoatry ny mahita ny ambadika birao.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fahazoan-dàlana sy ny lahatahiry (II)
Amin'ity fizarana faharoa ity dia ho hitantsika ny fomba fampiasana ny nomenclature isa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana rakitra, dingana teo aloha hahalala ny fomba fanovana azy ireo.
Swappiness: Ahoana ny fanitsiana ny fampiasana fitadidiana virtoaly
Andao hojerentsika ny fomba fanovana ny soatoavin'ny swappiness hametrahana ohatrinona ny fitadidiana virtoaly ampiasaina amin'ny solosaintsika.
Mangaka Linux, Ubuntu ho an'ny otakus be indrindra
Mangaka Linux dia fizarana iray izay miorina amin'ny Ubuntu ary manana manga ho lohahevitra ifotony amin'ny fizarana ary koa ny birao vaovao, Pantheon.
Kexi, ilay mpifaninana amin'ny Access for Linux dia efa tonga amin'ny andiany 3
Kexi no angon-drakitra azo avy amin'ny Calligra ary toa izany no tsara indrindra maka tahaka ny fiasan'ny Microsoft Access fa amin'ny Ubuntu.
MAX nahavita azy tamin'ny andiany 8
MAX linux dia iray amin'ireo fizarana noforonin'ny Community of Madrid miorina amin'ny Ubuntu. Ity fizarana ity dia nahatratra ny andiany faha-8 miaraka amin'ny vaovao bebe kokoa.
Divay divay, ilay divay nanara-maso tsy ampy anay
Ny divay divay dia fork an'ny divay izay mifototra amin'ny divay ary manao fanovana maro amin'ny divay hanatsara azy io sy hanitsiana ireo bibikely ao amin'ilay programa.
Fandaharana ERP 3 hampiasaina ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny Ubuntu dia misy programa ERP marobe ampiasaina, na izany aza vitsivitsy ihany no mendrika ampiasaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny programa ERP malaza telo izahay.
Ahoana ny fametrahana Webmin amin'ny Ubuntu 15.04
Azontsika atao ny mametraka Webmin amin'ny fomba tsotra ao amin'ny Ubuntu 15.04, ary miaraka aminy no ananantsika fitaovana saika tonga lafatra amin'ny fanamboarana ny rafitra.
Soloy Nautilus amin'ilay Nemo vaovao ao anaty Firaisankina
Nemo dia iray amin'ireo forks izay manana fiainana sy fahatanjahana bebe kokoa miaraka amin'ny Kanelina, fa io ihany koa dia afaka mandeha, amin'ity lesona ity dia lazainay aminao ny fomba hanaovana azy
Peppermint OS dia mahatratra ny kinova 6
Peppermint OS 6 no tsimbadika vaovao an'ny Peppermint OS, ilay rafitra fandidiana maivana mifototra amin'ny Ubuntu 14.04 na dia mampiasa programa LXDE sy Linux MInt aza izy.
Ahoana ny fametrahana GNOME 3.16 amin'ny Ubuntu GNOME 15.04
Azontsika atao izao ny mametraka ny GNOME 3.16 amin'ny Ubuntu GNOME 15.04 hankafizantsika ireo fanatsarana sy vaovao maro entiny.
MATE Tweak dia fitaovana tsotra ho an'ireo vao manomboka mamela antsika hanova mora foana ny fisehoana sy ny fikirakirana ny MATE sy ny Ubuntu.
Tsy sarotra ny fahazoana sy hifehezana alalana fisie sy lahatahiry, ary hiezaka ny hampiseho izany amin'ny fomba tsotra indrindra ho an'ireo izay manomboka izahay.
Zimbra dia fitaovana iray tena ilaina amin'ny fiaraha-miasa sy fitantanana fitaovana, andao hojerentsika ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fametrahana Mutter sy Metacity amin'ny Ubuntu MATE
Na dia miaraka amin'i Marco sy Compiz ho mpitantana varavarankely aza ny Ubuntu MATE, afaka manampy Metacity sy Mutter amin'ny dingana vitsivitsy fotsiny isika.
Lubuntu: ny fomba fanovana sary an-tsokosoko amin'ny fidirana rehetra
Ity fomba tsotra asehontsika eto ity dia ahafahantsika manova ny sary sokitra Lubuntu tsy tapaka isaky ny miditra isika.
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny programa FATHER
Ny fe-potoana fandefasana hetra isan-taona dia nanomboka herinandro vitsivitsy lasa izay ary izany no antony hametrahana ny PADRE Program ao Ubuntu.
Ahoana ny fomba fametahana ny partition amin'ny DM-Crypt LUKS
Ny fampidirana fizarana miaraka amin'ny DM-Crypt LUKS ao amin'ny Ubuntu dia tsy sarotra, andao jerena ireo dingana hahatratrarana azy amin'ny fomba mandaitra.
Ubuntu dia hanova ny anaran'ny interface interface
Miaraka amin'ny fivoarana vaovao, misy zavatra vaovao mipoitra, toy ny fiovan'ny rafitra amin'ny anaran'ny tambajotram-pifandraisana, fanovana izay mbola tsy famaranana na akaiky
Timeshift, fitaovana iray hamerenana amin'ny laoniny ny Ubuntu
Timeshift dia rindranasa backup tsotra izay maka sary ny rafitra ary hamerina azy ireo toy ny taloha, mamela ny rafitra toy ny amin'ny fisamborana.
Ahoana ny fomba hamehezana rakitra sy lahatahiry ary ampifanaraho amin'ny Dropbox, Drive na OneDrive
Ny EncFS dia vahaolana tsotra izay ahafahantsika manafina ny lahatahiry sy rakitra rehetra alefanay amin'ny serivisy fitehirizana rahona.
Manamaivana Chrome amin'ireto tetika tsotra ireto
Mihabetsaka mavesatra sy mavesatra kokoa i Chrome, noho izany dia lazainay aminao ny andiam-pitaka izay hahafahanay manamaivana ny Chrome nefa tsy mila atao raha tsy misy Chrome.
Fitaovana 3 handoroana ny kapila Ubuntu amin'ny pendrive
Lahatsoratra kely momba ny fitaovana telo manan-danja sy maimaim-poana hahafahana mandoro ny sary kapila fametrahana Ubuntu amin'ny pendrive tsotra.
Ahoana ny fametrahana WordPress + LAMP amin'ny Ubuntu
Andao hojerentsika ny fomba ahafahantsika mampiasa Wordpress amin'ny mpizara LAMP antsika, fomba fanao tsotra izay tsy maharitra 20 minitra.
Libgcrypt11 dia mahatonga an'i Spotify sy Brackets tsy mandeha amin'ny Ubuntu 15.04
Ny tsy fisian'ny tranomboky libgcrypt11 ao amin'ny trano fitahirizana dia mahatonga ny fampiharana toa Spotify na Brackets tsy mandeha amin'ny Ubuntu 15.04 na dia napetraka aza izy ireo.
Ahoana ny famahana ny tsy fitovizan'ny fotoana amin'ny baoty roa
Ny baoty roa na baoty roa no endrika malaza indrindra amin'ny fametrahana Linux, fa tsy zava-poana satria io fomba roa io dia azo atambatra amin'ny solosaina iray ihany.
Ahoana ny fametrahana Lubuntu 15.04
Nametraka Lubuntu 15.04 izahay, ilay variana maivana na fofona maivana indrindra amin'ny zavatra omen'ny Canonical amin'ny fomba ofisialy.
Xubuntu 15.04: fametrahana tsikelikely
Xubuntu dia iray amin'ireo tsiro an'ny Vivid Verbet izay efa misy, ndao hojerentsika ny fomba fametrahana azy amin'ny solosaintsika.
Mianara mametraka Ubuntu MATE 15.04 ary mankafiza Ubuntu faran'izay mahazatra
Ubuntu MATE dia mamerina ny birao Ubuntu quintessential, ary hampianarinay anao ny fomba fametrahana sy fanatsarana izany mba hahazoanao tombony betsaka amin'izany.
Ubuntu 15.04 Vivid Vervet, torolàlana kely ho an'ny tsy salama
Ubuntu 15.04 Vivid Vervet dia efa vonona ary alaina ho alaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fametrahana sy ny fametrahana ny verte Ubuntu Vivid izahay.
Ahoana ny fanovana ireo rindranasa tsy misy fampiasa ao amin'ny Ubuntu
Ny Ubuntu koa dia mamela antsika hanova sy hametraka rindranasa default, mora be izany, mila manaraka fotsiny ireo dingana amin'ity fampianarana ity ianao.
Tomahawk, mpilalao mozika mivantana ho an'ny Ubuntu
Tomahawk dia mpilalao mozika izay mifamatotra amin'ny Ubuntu izay manome ny fahafaha-mitantana ny serivisy mozika amin'ny alàlan'ny streaming.
Elementary OS Freya dia azo alaina sy alaina
Andro vitsy taorian'ny famoahana ny beta farany, Elementary OS Freya dia azo alaina amin'ny fampiasana sy ny famokarana ankehitriny. Tena dikan-paoma
Ampidiro Corebird, mpanjifa Twitter mahery ao amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fomba fametrahana Corebird, mpanjifa Twitter matanjaka sy tsotra izay tsy ao amin'ny tahiry ofisialy Ubuntu Utopic Unicorn.
Ahoana ny fomba handaminana ny Ubuntu Server hahazoana ny fanavaozana ny fiarovana ho azy
Ubuntu Server dia azo alamina mba hahazoanao fanavaozana ny fiarovana ho azy. Andao hojerentsika ny dingana ilaina amin'izany.
Akanjo ny Ubuntu anao amin'ny famolavolana fisaka
Apple dia nampiroborobo ny lamaody famolavolana fisaka, zavatra izay tsy afa-mandositra an'i Ubuntu. Amin'ity fampianarana kely ity dia afaka manana ny endrika fisaka ao amin'ny Ubuntu izahay.
Ahoana ny fomba fametrahana ireo lahatahiry lavitra miaraka amin'ny SSHFS
Amin'ny alàlan'ny SSHFS dia azontsika atao ny manararaotra ny protokol SSH hametahana lahatahiry lavitra amin'ny solosaintsika ary hampiasa azy ireo ho ampahany amin'izany.
Ahoana ny fampiasana ny navigateur TOR hialana amin'ny fianjerana amin'ny tranokala
Ny tantara ratsy momba ny piraty farany dia nahatonga ny orinasa hanivana ny fahalalahan'ny mpampiasa azy, izany dia azo vahana amin'ny browser TOR.
Ahoana ny fanavaozana hatrany ny Ubuntu amin'ny kinova LTS
Ny fanavaozana hatrany ny kinova Ubuntu ho an'ny LTS dia zavatra tsotra be, satria hasehonay etsy ambany.
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny IDE Arduino ho an'ny tetikasanao miaraka amin'i Arduino
Ny Arduino IDE dia miasa tanteraka ao amin'ny Ubuntu, amin'ny fomba ahafahantsika mametraka azy avy ao amin'ny terminal ary mamorona fotoana fohy ny programa ho an'ny Arduino.
Linux Lite 2.2, kinova nohatsaraina ho an'ny solosaina tsy manam-bola firy
Linux Lite 2.2 no kinova farany amin'ny fizarana malaza ho an'ny solosaina loharano ambany. Miorina amin'ny Ubuntu 14.04 izy io ary manana etona hilalao ihany koa
Ny Intel Linux Graphics Drivers dia efa manana fanohanana ho an'ny Ubuntu 14.10
Vao avy nanavao ny Intel Linux Graphics Drivers i Intel hanohanana ny Ubuntu 14.10 sy ny Fedora 21, ny kinova farany azo antoka amin'ireo fizarana ireo.
Tilda, ny terminal eo no ho eo dia eo amin'ny Ubuntu MATE 15.04
Tilda dia emulator terminal izay hampiasa Ubuntu MATE amin'ny toerana misy anao ary izany dia haingana kokoa noho ny terminal mahazatra. Manana fidirana lehibe i Tilda.
Ahoana ny fomba fananganana milina virtoaly ao amin'ny toeram-piasana VMWare 11
Vantany vao tafapetraka ny VMware Workstation dia ho hitantsika ny fomba hampiasantsika azy io hamoronana milina virtoaly ho an'ny rafitra fiasa samihafa.
Ahoana ny fametrahana VMWare amin'ny Ubuntu 14.10
Fotoana vitsy lasa izay dia nahita ny fomba fametrahana VirtualBox amin'ny Ubuntu izahay, raha te hampiasa ny iray amin'ireo fitaovana fanta-daza indrindra ...
Jereo ny fomba hijerena horonantsary YouTube avy amin'ny terminal anao
Anio dia hasehoko anao ny fomba hijerena ireo horonantsary YouTube amin'ny alàlan'ny terminal sy ny fampiasana baiko. Toy ny mahazatra dia manome fahagagana amintsika ilay terminal mahery.
Ampidiro ny Screenfetch ary ampanjifa ny terminal anao
Screenfetch dia script izay hanampy ny sary famantarana ny fizarana anao ao amin'ny kaody ASCII ao amin'ny efijery ny terminal anao rehefa nosokafanao. Mampianatra anao hametraka azy izahay.
OwnCloud 8, ny vahaolana vaovao ho an'ny Cloud 'home'
Ny OwnCloud 8 dia kinova vaovao amin'ity programa malaza ity izay mamela antsika hanana vahaolana Cloud tsotra sy an-trano, tsy mila mandoa vola na ho mpampianatra lehibe.
Ahoana ny fomba hananganana node Tor ao Ubuntu
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny node Tor dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana amin'ity tambajotra ity izahay izay ahafahantsika mitazona ny tsiambaratelo rehefa mijery Internet.
Mampiasà smartphone Android ho toy ny webcam miaraka amin'i Motion hanaraha-maso ny tranonao
Amin'ny alalàn'ity lesona tsotra ity dia hianarantsika ny fomba fampiasana smartphone Android ho toy ny webcam hanaraha-maso ny tranontsika rehefa tsy eo izahay.
Ahoana ny famerenana ny fizarana NTFS amin'ny boot roa miaraka amin'ny Windows 8
Maro amin'ireo mpampiasa mampiasa Linux no manana rafitra boot roa ary ampiarahinay amin'ny Windows. Mety hiteraka tsy fifanarahana madinidinika izany.
Ahoana ny fomba hanovana ny Lubuntu ho Gnome Classic
Fampianarana kely izay misy ny fanomezana an'i Lubuntu ny fisehoan'ny Gnome Classic na ny desktop Gnome alohan'ny kinova 3, izay nanova ny biraonao manontolo.
Ahoana ny fametrahana server PXE (network boot)
Amin'ny alàlan'ny mpizara PXE dia azontsika atao ny manamboatra ny solosainantsika amin'ny alàlan'ny tamba-jotra ary mahazo azy io ny fametrahana Linux ISO
Ahoana ny fomba hamoronana tranokala Netflix
Netflix dia serivisy fialamboly mivantana malaza, serivisy izay azontsika atao izao ankafizinay avy amin'ny Ubuntu noho ny webapp an-trano.
Ahoana ny fomba hahitana sy hanaisotra ireo rakitra anaovana duplicate amin'ny dupeGuru
dupeGuru dia fitaovana iray izay vao tsy ela akory izay nahazoana alalana tamin'ny lisansa GPLv3, ary ahafahantsika mahita rakitra fisokafana.
Ahoana ny fametrahana OpenVPN Access Server
OpenVPN dia iray amin'ireo safidy tsara maro hiarovana ny tsy fitonona anarana amin'ny tamba-jotra ary hitety IP tsy mitovy amin'ny nomen'ny ISP anay.
Firy ny olona ao amin'ny tamba-jotra wifi anay? (Fanazavana)
Ny tutorial momba ny fanamarinana raha misy mpiditra an-tsokosoko ao amin'ny tambajotra Wifi dia niteraka resabe, noho izany ity lahatsoratra ity izay manazava ireo hevitra marobe nampiady hevitra.
Ahoana ny fametrahana SHOUTcast amin'ny Ubuntu
Shoutcast no teknolojia mamela antsika hamorona onjam-peo amin'ny Internet amin'ny solosainantsika ary manomboka mandefa mozika amin'ny tambajotra.
Fomba entina manamboatra ny post-install Xubuntu
Aorian'ny fametrahana Xubuntu dia mila mametraka programa maromaro isika, asa mandreraka izay voavaha amin'ny fampiasana ny script Xubuntu post-fametrahana
Firy ny olona ao amin'ny tamba-jotra wifi anay?
Raha manana Ubuntu isika dia afaka mahafantatra miaraka amin'ny baiko roa izay ao amin'ny tamba-jotra Wi-Fi misy antsika ary raha misy olona izay maka loharano amin'ny Internet.
PdfMasher na ny fomba fanovana ny pdf ho epub
Betsaka ny fitaovana ahafahantsika manova ny rakitra PDF ho rakitra epub fa ny PdfMasher ihany no mamela antsika handamina sy hisafidy amin'ny dingana tsirairay.
Ahoana no filalaovana atiny Flash sy H.264 ao amin'ny Opera 26
Andao hojerentsika ny dingana tokony harahina mba hilalaovana horonan-tsary Flash sy H.264 ao amin'ny Opera 26 ho an'ny Linux, izay indrisy fa tsy mampiditra izany amin'ny alàlan'ny default.
Ahoana ny fomba fampifanarahana ny solosaina 2 amin'ny Unison
Unison dia loharano misokatra sy fitaovana multiplatform ahafahantsika mampifanaraka lahatahiry 2 amin'ny fomba roa ampiasana SSH, RSH na Socket.
Ubuntu Core, filokana an'ny Ubuntu amin'ny Cloud
Ubuntu Core dia ny fanoloran-tenan'ny Ubuntu amin'ny rafitra Cloud ary hampiakatra ny rafitra fonosana vaovao, hahomby ve izany?
Mametraka sy mampiasa backupninja amin'ny Ubuntu
Backupninja dia fitaovana backup tsotra sy be dia be, ary ho hitantsika ny fomba fametrahana azy ary manomboka mampiasa azy.
Bitcoin amin'ny Ubuntu
Bitcoin dia nilamina taorian'ny fipoahana, izy io koa dia nahatonga azy hiditra tsara tamin'ny Ubuntu tamin'ny alàlan'ny poketra sy rindrambaiko fitrandrahana.
Ahoana ny fametrahana Compiz amin'ny Ubuntu MATE
Azontsika atao ny mametraka Compiz amin'ny Ubuntu MATE amin'ny fomba tena tsotra, ary asehonay anao koa ireo dingana hongotantsika azy raha tsy afa-po amin'izany ianao.
Amboary ny SSH raha te hiditra tsy misy teny miafina
SSH dia azo ampiasaina hidirana amin'ny lavitra raha tsy mampiasa teny miafina, amin'ny alàlan'ny fampiharana lakilem-panjakana sy tsy miankina. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io.
Asehoy ny kalandrie Google anao eo amin'ny birao miaraka amin'i Conky
Misaotra an'i Conky sy Gcalcli afaka mampiseho sy mampifandray ny Kalandrie Google amin'ny birao izahay ary manao azy amin'ny fomba izay tsy mandany saika ny loharano rehetra.
RemoteBox: fampitaovana sary hitantanana lavitra ny VirtualBox
Andao hojerentsika ny fomba fametrahana sy fampiasana RemoteBox, fitaovana iray ahafahantsika mitantana milina virtoaly VirtualBox amin'ny lozisialy lavitra.
Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana rsnapshot ho an'ny backup fanampiny
Rsnapshot dia fitaovana iray ahafahantsika manamboatra backup fanampiny eo an-toerana sy lavitra, andao hojerentsika ny fomba fametrahana, fikirakirana ary fampiasana azy.
Ahoana ny fametrahana MediaWiki amin'ny Ubuntu
Andao hojerentsika ny fomba fametrahana MediaWiki amin'ny Ubuntu, raha te hampiasa ireo fitaovana fanovana miaraka.
Ahoana ny fametrahana GNOME 3.14 amin'ny Ubuntu GNOME 14.10
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn dia tsy afaka nampiditra ny GNOME 3.14, saingy soa ihany fa azontsika atao ny manampy azy tsotsotra ary eto dia asehontsika azy.
Ahoana ny fametrahana Tomcat amin'ny Ubuntu
Ity fampianarana tsotra ity dia mampiseho amintsika ny dingana hametrahana ny Tomcat ao amin'ny Ubuntu, aorian'izay dia ho afaka hanompo ny JavaServer Pages and Servlets ny mpizara anay.
Ahoana no hahitana hoe .jar manaova kilasy Java iray an'iza
Ny fitadiavana izay rakitra .Jar kilasin'ny Java iray anisany dia asa iray izay mety hanahirana rehefa mitombo ny haben'ny tetikasanay.
Ahoana ny fomba hananganana VPN mpiara-mianatra aminao
Ny fananganana tamba-jotra VPN mpifanaraka amin'ny peer ao amin'ny Ubuntu dia tsotra dia tsotra ary mamela antsika hanafoana ny sakan-tavoahangy mety hahatongavan'ilay mpizara.
Mametraha phpIPAM hitantanana adiresy IP sy subnets tambajotra eo an-toerana
phpIPAM dia fitaovana mamela ny mpitantana ny rafitra hitantana mora foana ny adiresy IP sy ny subnets an'ny tambajotra eo an-toerana.
Ahoana ny fametrahana Joomla amin'ny Ubuntu 14.04
Amin'ity lesona fohy ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana Joomla amin'ny Ubuntu 14.04, mba hananana safidy hafa hisafidianana ity CMS loharano misokatra tsara ity.
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fanohanana ny NVIDIA Optimus ao amin'ny Ubuntu 14.04
Ny fanavaozana farany ny Ubuntu 14.04 dia nanimba ny fanohanan'ny NVIDIA Optimus ho an'ny mpampiasa maro; andao jerena ny fomba fanamboarana izany olana izany.
Ahoana ny fametrahana ny World of Warcraft amin'ny Ubuntu
Miaraka amin'ny taom-pianarana vaovao, maro amintsika no tototry ny saina ary inona no fomba tsara kokoa noho ny tsy manala adin-tsaina fa tsy milalao mangingina ny World of Warcraft ao amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fanamboarana tahiry WordPress
Raha simba ny tahiry data an'ny fametrahana Wordpress antsika, dia hisy ny olana amin'ny fahitana ny atiny. Andao hojerentsika ny fomba fanitsiana ireo bibikely ireo.
Ahoana ny fametrahana Drupal amin'ny Ubuntu 14.04
Ny fametrahana Drupal amin'ny Ubuntu 14.04 dia dingana iray somary tsotra sy haingana ary eto dia asehonay anao ny fomba fanaovana azy.
Ahoana ny fametrahana Monitorix hanaraha-maso ny mpizara tranonkala
Miaraka amin'ny Monitorix dia afaka manara-maso ny mpizara tranonkala izahay, ankoatry ny lafiny samihafa amin'ny rafitray.
Ankafizo ny tsara indrindra amin'ny Windows noho ny fanavaozana PlayonLinux
Playonlinux dia programa iray mampiasa divay ary mampifanaraka izany amin'ny mpampiasa vao afaka mampiasa programa Windows ao amin'ny Ubuntu izy. Ny kinova farany dia tena nahomby
Obuntu, ny Ubuntu ho an'ny eReaders
Nisy mpamorona iray namorona fizarana Ubuntu ho an'ny eReader, antsoina hoe Obuntu izy ary mampanantena zavatra betsaka.
Ahoana ny fomba handefasana ny fanamarinana dingana roa amin'ny SSH amin'ny alàlan'ny Google Authenticator
Ny fanamarinana dingana roa dia fomba azo antoka hidirana amin'ny mpizara antsika, andao hojerentsika ny fomba handrindrana azy amin'ny SSH amin'ny alàlan'ny Google Authenticator.
Plasma 5, inona no vaovao avy amin'ny KDE
KDE dia nanambara fa mamoaka ny kinova Plasma vaovao izy. Ny Plasma 5 dia mirakitra fanohanana tsara kokoa ho an'ny fampisehoana HD, OpenGL ary manatsara ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Ahoana ny fidirana amin'ny OneDrive avy amin'ny birao Ubuntu
OneDrive dia ny serivisy Microsoft Cloud izay manana programa client handrindrana ao amin'ny Ubuntu, na dia mpanjifa tsy ofisialy aza izy io.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana autojump hanafainganana ny fivezivezena eo amin'ny lahatahiry
Autojump dia fitaovana kely dia kely izay mamela antsika hifindra amin'ny lahatahiry amin'ny baiko tokana, na aiza na aiza misy antsika.
Ahoana ny fomba fampidirana sy fanesorana ireo fampiharana amin'ny fanombohana Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fomba fampidirana sy fanesorana ireo rindranasa amin'ny fanombohana ny rafitra Ubuntu, zavatra tsotra raha manana birao feno ianao.
Araho maso ny mpizara Nginx miaraka amin'ny Linux-dash
Linux-dash dia fitaovana ahafahantsika manara-maso ireo mpizara; Andao hojerentsika ny fomba fampiasana azy miaraka amin'i Nginx.
Ahoana ny fametrahana gThumb 3.3.2 amin'ny Ubuntu GNOME 14.10
Ubuntu GNOME 14.04 dia miaraka amin'ny andiany 3.2.7 an'ny gThumb, fa andao jerena ny fomba hanatsarana ny 3.3.2 hanararaotra ireo tombony samihafa.
Ampidiro ny LEMP ao amin'ny Ubuntu Trusty Tahr
Fampianarana kely momba ny fametrahana server LEMP ao amin'ny Ubuntu Trusty Tahr, safidy iray amin'ny LAMP nentim-paharazana an'ny mpizara Apache.
Fitaovana 3 hanatsarana ny vokatra eto Ubuntu
Lahatsoratra momba ny fitaovana telo izay hanampy antsika hampitombo ny vokatra raha mampiasa ny teknikan'ny Gets Things Done sy Pomodoro malaza izahay.
Manavaka ny lahatahiry Nemo sy Nautilus amin'ny lokony miaraka amin'ny lokon'ny Folder
Amin'ny alàlan'ity famenony kely ho an'i Nemo sy Nautilus ity dia hahafahantsika manavaka ny lahatahiry amin'ny loko, izay azontsika omena amin'ny fomba manokana
Ahoana ny fametrahana MATE 1.8 sy Cinnamon 2.2 amin'ny Ubuntu 14.04
Fampianarana kely momba ny fametrahana ny MATE 1.8 sy ny kanelina 2.2 amin'ny kinova Ubuntu farany teo, amin'ny Trusty Tahr. Version izay tsy nanohana azy ireo hatreto.
Ubuntu 14.04: ny fomba fanaovana backup miaraka amin'i Deja Dup ary hitahiry azy ireo ao anaty boaty
Ubuntu One dia efa miala amin'ny sarintany, saingy azontsika atao ny manolo azy amin'ny Box mba hitahiry ireo backups ataontsika amin'ny alàlan'ny Deja Dup ao
Mamorona tahiry fonosana LTS ho an'ny Lubuntu
Mandefasa momba ny famelana toerana fitahirizana manokana ho an'ny Lubuntu izay hisy rindrambaiko azo antoka sy azo antoka ho an'ny kinova LTS an'ny Lubuntu.
LXQt ny ho avin'ny LXDE sy Lubuntu?
Mandefasa momba ny LXQT kinova vaovao an'ny LXDE izay mifototra amin'ny LXDe fa miaraka amin'ireo tranomboky QT, maivana noho ny fampiasana tranomboky GTK ao amin'ny kinova farany.
Fizarana 5 Gnu / Linux ho an'ny solosaina taloha
Alefaso ny momba ny fizarana 5 malaza indrindra amin'ny solosaina taloha, ny fizarana izay miorina amin'ny Ubuntu na Debian ary mifantoka amin'ny solosaina taloha.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr? (Fizarana IV)
Manohy ny torolàlana momba ny fanatsarana azonay ampiharina amin'ny Ubuntu 14.04 Trusty Tahr izahay hampifanaraka azy tsara amin'ny safidinay.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr? (Fizarana III)
Alefaso ny zavatra hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 ary hiatrehana ireo olana mahazatra indrindra amin'ny tsimbadika farany amin'ny fizarana Canonical.
Ubuntu, mety amin'ny fitantanana sy ny fanaraha-maso tambajotra
Alefaso amin'ny fomba hanaraha-maso ny tambajotra noho ny rindrambaiko epoptes, rindrambaiko mamela antsika hanara-maso maimaimpoana ireo tambajotra.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr? (Fizarana II)
Nametraka ny Ubuntu 14.04 Trusty Tahr izahay, saingy fanombohana fotsiny izany, ary azontsika atao ny manamboatra azy io amin'ny fomba itiavantsika azy indrindra. Andao hojerentsika ny fomba.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04?
Fampianarana kely ho an'ny zaza vao teraka momba izay tokony hatao aorian'ny fametrahana ny Ubuntu 14.04, ny kinova farany an'ny Ubuntu hifanindry amin'ny fahatapahana Windows XP.
Ahoana ny fanamboarana ny rafitry ny rakitra amin'ny fsck
fsck no baiko ahafahantsika manamarina ny fahamendrehan'ny rafitry ny rakitra ary ho hitantsika ny fomba fampiasana azy.
Pantheon, ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely hametrahana Pantheon, ny birao Elementary OS ao amin'ny Ubuntu, ary koa ny mety hanomezana izany fisehoana izany.
Ahoana ny fametrahana Java ao Ubuntu
Ny fametrahana Java amin'ny Ubuntu dia tsy mahitsy sy tsotra araka ny tokony ho izy, fa miaraka amin'ireto torolàlana ireto dia afaka tanterahintsika ao anatin'ny minitra vitsy.
TLP, fitaovana iray hanitarana ny batterin'ny laptop-nay
Lahatsoratra momba ny TLP, fitaovana tsy mampino izay mamela antsika hitahiry ny bateria finday amin'ny alàlan'ny fanovana ny fitondran-tenan'ireo fitaovana sy Ubuntu.
Mametraka MATE 1.8 amin'ny Ubuntu 13.10 sy 12.04
Torolàlana tsotra izay manazava ny fomba fametrahana MATE 1.8 amin'ny Ubuntu 13.10 sy Ubuntu 12.04. MATE dia fork an'ny sampana 2.x an'ny GNOME malaza.
Guadalinex Lite, ubuntu Espaniôla misy ondrilahy 128 mb
Vaovao momba ny fanombohana ny Guadalinex Lite, ny fizarana Andalosiana vaovao miorina amin'ny Guadalinex V9 fa ho an'ny fitaovana efa tonta na taloha.
Ubuntu dia mety hanana mpitety tranonkala tsara indrindra eran'izao tontolo izao sy ny anao
Vaovao momba ny fananganana ny mpizaha azy manokana avy amin'i Ubuntu, tao amin'ny fihaonamben'ny Ubuntu Developer farany teo.
Ubuntu 14.04: azonao atao farany ny manamaivana ny windows avy amin'ny mpandefa
Ao amin'ny Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr dia azo ahena ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary Unity launcher.
Ny wallpaper ofisialy Ubuntu 14.04 LTS
Ny sary ofisialy Ubuntu 14.04 dia naseho, na ireo voafidy tamin'ny alàlan'ny fifaninanana fiarahamonina na ilay toerana misy anao vaovao.
KXStudio, fizarana famokarana feo miorina amin'ny Ubuntu
KXStudio dia andiana fitaovana sy plug-in ho an'ny famokarana feo sy horonantsary. Ny fizarana dia mifototra amin'ny Ubuntu 12.04 LTS.
Ahoana ny fametrahana Lubuntu 14.04 amin'ny solo-sainay #StartUbuntu
Fampianarana kely izay ampianarintsika ny fomba fametrahana Lubuntu 14.04 amin'ny solosainantsika. Fizarana faha-2 amin'ny andiany Ubuntu Begins izay ampianarinay ny fomba fanesorana XP
Inona ny tsiro ny Ubuntu no fidiko? #StartUbuntu
Lahatsoratra voalohany amin'ny andian-dahatsoratra izay hampianaranay ny fomba fandehanana manomboka amin'ny Windows XP mankany Ubuntu. Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny tsiro hofidina hapetraka izahay.
Ahoana ny fomba hifehezana ny Ubuntu avy amin'ny takelaka
Fampianarana kely momba ny fomba hifehezana ny birao Ubuntu avy amin'ny takelaka misy antsika, na dia azo ampiasaina amin'ny telefaona finday sy rafitra miasa hafa aza izy io.
Koala, fitaovana tsara ho an'ny mpamorona
Lahatsoratra momba Koala, fitaovana tsara ho an'ny mpamorona tranonkala ahafahantsika mampiasa ireo mpikirakira ao amin'ny Ubuntu maimaim-poana.
Ubuntu 14.04: menus ao amin'ny bara lohateny
Ao amin'ny Ubuntu 14.04 dia azo aseho eo amin'ny tsanganana lohatenin'ireo fikandrana ireo bara fisehatra. Vaovao tsara ho an'ireo izay tsy tia ny menio manerantany.
Super City, ny lalao natao tamin'i Krita, Blender ary GIMP
Super City no anaran'ny lalao video noforonina miaraka amina fitaovana telo tena malaza eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana: Krita, Blender ary GIMP.
Mampiasa Ubuntu amin'ny Internet Café
Lahatsoratra momba ireo safidy tsy maintsy ampiharintsika amin'ny Ubuntu amin'ny cafe internet, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny sarotra indrindra. Mampiasa foana Rindrambaiko Maimaimpoana
Ahoana ny fametrahana fonosana ao amin'ny Ubuntu amin'ny tanana
Tutorial momba ny fomba fametrahana fonosana amin'ny tanana ao amin'ny Ubuntu, izany hoe ilay antsoina hoe fanangonana ny kaody loharano an'ny programa sy ny fanatanterahana azy.
Lxle, fizarana idealy hamelomana indray ny ekipa taloha
Lahatsoratra momba ny LXLE, fizarana miorina amin'ny Lubuntu 12.04 ary natao ho an'ny solosaina tsy manana loharanom-bola firy. Miezaka mampifanaraka ny fisehon'ny Windows koa izy.
Clementine OS dia niala haingana be araka ny nahatongavany
Clementine OS koa dia nanjavona tsy ho saritany. Toa nisy orinasa iray nandrahona ny hitory ny mpamorona azy.
Solony hafa hamoronana ebook ao amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra momba ny safidy tsara indrindra ananantsika hamoaka ebook amin'ny alàlan'ny Ubuntu. Saika maimaimpoana sy misy amin'ny Ubuntu avokoa izy ireo
Kronometer, famantaranandro feno ho an'ny KDE Plasma
Kronometer dia famantaranandro tsotra nefa feno ho an'ny KDE Plasma novokarin'i Elvis Angelaccio ary nozaraina ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Radio Tray, henoy mora foana ireo onjam-peo amin'ny Internet
Radio Tray dia fampiharana kely mamela antsika hihaino ireo onjam-peo amin'ny Internet haingana sy tsy misy fahasarotana.
Ahoana ny fomba hanafoanana sy hamafana ireo trano fitahirizana ao amin'ny openSUSE
Torolàlana tsotra izay manondro ny fomba tsy hamonoana sy hamafana trano fitahirizana amin'ny openSUSE amin'ny alàlan'ny console mampiasa Zypper.
Google2ubuntu na ny fomba hifehezana ny Ubuntu amin'ny feo
Lahatsoratra momba ny Google2ubuntu izay ahafahantsika mamantatra ny kabary amin'ny Ubuntu avy amin'ny Google Voice API, amin'izao fotoana izao dia manaiky ny anglisy sy frantsay.
Zorin OS 8 dia eto
Ny ekipa Zorin OS dia namoaka ny andiany 8 an'ny Zorin OS Core sy ny Zorin OS Ultimate andro vitsy lasa izay. Zorin OS 8 dia fizarana miorina amin'ny Ubuntu 13.10.
Lightworks dia mandalo ny tontolon'ny Free Software miaraka amin'i Ubuntu
Vaovao momba ny fandefasana kinova lIghtworks vaovao, amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny fisehoana kinova ho an'ny Ubuntu sy Free Software.
Ahoana ny fomba handrindrana menio ao amin'ny Openbox miaraka amin'i Obmenu
Fampianarana kely momba ny fomba fanamboarana na famoronana menio tsotra ao amin'ny Openbox, misaotra ny fitaovana obmenu izay manova ny menus.
Clementine OS, ilay OS OS vaovao
Clementine OS dia fork an'ny Pear OS ary tsia, tsy misy ifandraisany amin'ilay mpilalao izany. Ny kinova voalohany an'ny Clementine OS dia hiorina amin'ny Ubuntu 14.04.
Ahoana ny fametrahana ny Openbox amin'ny Ubuntu hanamaivana ny rafitray
Fampianarana kely momba ny fametrahana ny Openbox, mpitantana varavarankely maivana ho an'ny Ubuntu izay manamaivana ny enta-mavesatra ao amin'ny rafitray.
Ahoana ny fametrahana extensions amin'ny kanelina
Fampianarana kely momba ny fametrahana fiparitahana amin'ny birao Cinnamon, amin'ny fampiasana ny tranokala ofisialin'ny birao, izay misy ny lisitry ny fanitarana
Ahoana ny fampiasana Pepper Flash ao amin'ny Chromium
Torolàlana tsotra izay manondro ny fomba fampiasana Pepper Flash ao amin'ny Chromium amin'ny fomba tsotra amin'ny alàlan'ny fampidirana ny tahiry fanampiny mifandraika amin'izany.
Chromium manao veloma an'i NPAPI sy Flash
Nanambara i Max Heinritz fa hitsahatra tsy hanohana plug-in izay mampiasa NPAPI ny Chromium vantany vao mivoaka ny kinova 34, anisan'izany ny Flash.
Fitaovana Laptop Mode, fitaovana tsotra ho an'ny baterin'ny laptop
Fampianarana kely momba ny Laptop Mode Tools, fonosana fitaovana ho an'ny Ubuntu izay manampy antsika hanatsara sy hikarakara tsara kokoa ny batterin'ny laptop.
Simple Screen Recorder, fitaovana iray amin'ny fampiatoana fotoana fohy
Lahatsoratra momba ny Simple Screen Recorder, programa izay ahafahantsika manao rakipeo matihanina amin'ny birao maimaimpoana.
Borosy hosodoko maimaim-poana ho an'i Krita
Vasco Alexander, mpampiasa sy mpanakanto dia nizara borosy borosy vita amin'ny rano ho an'ny vondrom-piarahamonina ho an'i Krita. Maimaimpoana tanteraka ilay fonosana.
Ahoana ny fametrahana VirtualBox 4.3.4 amin'ny Ubuntu 13.10 sy aloha
Torolàlana tsotra izay manazava ny fomba fametrahana VirtualBox 4.3.4 ao amin'ny Ubuntu 13.10 —ary ny fizarana azo— ampio ny tahiry ofisialy.
Mametraka Google Chrome amin'ny Ubuntu 13.10
Torolàlana tsotra manazava ny fomba fametrahana Google Chrome amin'ny Ubuntu 13.10 sy ny fizarana azo —Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, sns .—.
Ahoana ny fomba hijerena ny satan'ny baterintsika ao Ubuntu
Torolalana kely hahafantarana ny satan'ny bateria ary hampiakarana ny fizakantenan'ny batterie misy antsika miaraka amin'i Ubuntu tsy andoavam-bola.
Ahoana ny fanovana ny toeran'ny bokotra baravarankely ao Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fanovana ny toeran'ny bokotra hanidiana, hampihenana ary hampitomboana ny varavarankely an'ny Ubuntu ary miasa ihany koa ho an'i Debian
KWin, mpitantana varavarankely ho an'ny tontolo birao samihafa
Martin Gräßlin, mpamorona ao KWin, dia nanoratra lahatsoratra miresaka ny fahafaha-mampiasa ny manager window ao amin'ny tontolon'ny birao hafa.
Borosy maimaim-poana 850 ho an'ny GIMP
Mpampiasa sady mpanakanto GIMP Vasco Alexander dia nizara tamin'ny vondron'olona iray fonosana borosy tsy latsaky ny 850 ho an'ny rindrambaiko malaza.
Eclipse amin'ny Ubuntu. Ahoana ny fametrahana IDE ao amin'ny Ubuntu (II)
Lahatsoratra kely momba ny Eclipse, IDE malaza be indrindra noho ny safidiny ho an'ny Google rehefa mamorona Android sy fampiharana ho an'ity sehatra ity.
Netbeans ao Ubuntu, Ahoana ny fametrahana IDE ao amin'ny Ubuntu (I)
Fampianarana kely hametrahana IDE ao amin'ny Ubuntu, indrindra ny IDE antsoina hoe Netbeans izay manana fahazoan-dàlana maimaim-poana ary maro karazana.
VLC 2.1.1 manampy fanohanana fanandramana ho an'ny HEVC sy VP9
Ny ekipa mpamorona VLC dia namoaka ny VLC 2.1.1. Ilay mpilalao haino aman-jery malaza dia manana fanohanana ny HEVC / H.265 sy VP9 ihany.
Canonical dia te-hifindra amin'ny Ubuntu
Vaovao momba ireo singa ao amin'ny Ubuntu izay tian'i Canonical ovaina ary mety hanambara amin'ny herinandro ambony amin'ny fihaonamben'ny Ubuntu Developer.
GNUPanel, fitaovana tsara ho an'ny mpizara Ubuntu
Vaovao momba ny GNUPanel, fitaovana iray hitantanana ny fampiantranoana mpizara manana fahazoan-dàlana GPL ary mangataka famatsiam-bola hanoratana indray ny kaody.
Brackets, ilay Adobe Dreamweaver vaovao ho an'ny Ubuntu
Lahatsoratra momba ny tonian-dahatsoratra Brackets, mpamoaka loharanom-baovao open source an'i Adobe mba hampiroboroboana tranokala sy ny haitao mifandraika rehetra toy ny tontolon'ny tranonkala.
Ahoana ny fametrahana LibreOffice amin'ny Espaniola
Fampianarana kely hametrahana Libreoffice amin'ny Espaniôla amin'ny tsiro Ubuntu izay tsy tonga amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, toy ny tranga misy amin'ny Lubuntu sy Xubuntu.
Ahoana ny fomba hanampiana fanohanana multimedia amin'ny Ubuntu 13.10 sy ny tsirony
Raha te-hilalao horonan-tsary sy horonam-peo ao amin'ny Ubuntu 13.10 ianao dia mila mametraka ny fanohanana ireo endrika haino aman-jery voafetra.
Seafile, fitaovana matanjaka manana Cloud manokana
Lahatsoratra momba ny Seafile, fitaovana matanjaka izay mamela antsika hanana safidy hanovana ny Server Ubuntu ho rahona manokana sy tsy miankina.
Fandaharana fandraisana an-tsoratra 3 ao amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra momba ny programa fandraisana isa telo amin'ny rafitra Ubuntu. Maimaimpoana izy telo ary azo jerena ao amin'ny Ivon-toerana Software Ubuntu.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny soso-kevitra Amazon ao amin'ny Ubuntu 13.10
Torolàlana tsotra izay manazava ny fomba tsy hanajanonana ny soso-kevitr'i Amazon, eBay ary serivisy mitovy amin'izany an'ny Unity Dash ao amin'ny Ubuntu 13.10.
Orca, programa tsara ho an'ny jamba
Lahatsoratra momba ny Orca, rindrambaiko lehibe hamaky efijery na hampifandray ireo fitaovana Braille, programa mahasoa ho an'ireo jamba maniry hampiasa Ubuntu
Libreoffice amin'ny fomban'ny Elementary OS
Fampianarana tsotra momba ny fanovana ny fomba sy ny fisehoan'ny Libreoffice antsika hitovy amin'ny an'ny Elementary OS, raha manana an'ity fizarana ity ianao.
NVIDIA hamoaka tahirin-kevitra hanatsarana an'i Nouveau
Nanambara ny NVIDIA fa hanomboka hamoaka antontan-taratasy izy ireo hanampiana amin'ny fanatsarana an'i Nouveau, mpamily maimaim-poana ho an'ny karatry ny orinasa.
Fampiharana hianarana manoratra amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra momba programa telo ho an'ny Ubuntu hianatra manoratra amin'ny fomba nampianarin-tena ary hifankahazo tsara rehefa manoratra amin'ny klavier
SteamOS, fizarana Valve
Nanambara ihany i Valve tamin'ny farany SteamOS, rafitra miasa Linux izay mikendry ny hanavao ny indostrian'ny lalao PC ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Firefox Sync na ny fomba fampiraisana ireo mpanamory anay
Tutorial momba ny fomba fampifanarahana ireo mpizahatany Firefox amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny Firefox Sync, izay efa tafiditra ao anaty mpitety Mozilla Firefox rehetra.
Ovay ny sary masina LibreOffice
Tutorial momba ny fanovana ny lohahevitry ny LibreOffice hanamboarana azy. Lahatsoratra voalohany amin'ny andiany natokana ho an'ny LibreOffice sy ny vokatra
Mandefa kinova avidemux vaovao ry zareo
Lahatsoratra momba ny kinova Avidemux farany, 2.6.5, kinova izay mitondra fihatsarana lehibe sy ny fomba fametrahana azy amin'ny rafitra Ubuntu.
Ahoana ny fananana Google Drive ho disk drive ao Ubuntu
Fampianarana kely hanovana ny Google Drive ho kapila kapila ao amin'ny rafitra Ubuntu. Ny rafitra dia mitovy amin'ny Dropbox na Ubuntu One.
Ahoana ny fametrahana an'i Darling amin'ny Ubuntu 13.04
Darling dia sosona mifanentana mamela ny fampiharana Mac OS X mihazakazaka amin'ny Linux. Ny fametrahana azy ao amin'ny Ubuntu 13.04 dia tena tsotra.
Ny mpampidina horonantsary rehetra, misintona horonan-tsary avy amin'ny tranonkala rehetra mora foana
All Video Downloader dia fampiharana iray ahafahantsika misintona horonantsary avy amina tranonkala marobe —YouTube, Dailymotion, Veoh… - amin'ny fomba tena tsotra.
Xfce4 Composite Editor, fitaovana ilaina ho an'ny Xubuntu
Fampianarana kely momba ny Xfce4 Composite Editor, fitaovana iray ahafahantsika manamboatra sy manova ny birao Xfce na ny Xubuntu.
Darling, fampiharana OS X amin'ny Linux
Darling dia sosona mifanentana izay mikendry ny ho benchmark amin'ny fanohanana ny rindranasa ho an'ny Mac OS X, ny rafitra fiasan'i Apple, amin'ny Linux.
Nixnote 2, vahaolana ho an'ireo mpampiasa Evernote
Article-tutorial momba ny fametrahana Nixnote 2, mpanjifa Evernote tsy ofisialy izay miasa tsara amin'ny rafitra Ubuntu sy Gnu / Linux.
4K Video Downloader, misintona horonantsary YouTube amin'ny tsindry iray monja
4K Video Downloader dia fampiharana kely mamela antsika hisintona horonantsary YouTube haingana sy tsy misy fahasarotana.
App Grid ivon-rindrambaiko maivana ho an'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny App Grid, safidy mahomby sy haingana amin'ny Ubuntu Software Center hametrahana rindranasa ao amin'ny rafitray.
Pipelight na ny fomba hananana Silverlight ao Ubuntu
Fampianarana kely momba ny Pipelight sy ny fomba fametrahana azy, programa iray ahafahantsika mihazakazaka ny teknolojia Silverlight an'i Microsoft ao amin'ny Ubuntu
Tor na ny fomba fitetezana Internet amin'ny fomba tsy fantatra anarana
Tutorial momba ny Tor fampiharana iray izay hamadika ny fifandraisana rehetra amin'ny Ubuntu ho fifandraisana azo antoka kokoa ary hanome anay ny anarana tsy fantatra tadiavina.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Trim ao amin'ny Ubuntu
Tutorial momba ny kapila mafy Solid State (SSD) sy TRIM, inona izany, inona izany ary ahoana ny fomba hampiasana azy amin'ny rafitra Ubuntu.
Inona no hatao raha mijanona tsy milalao horonantsary YouTube ny SMPlayer
Andro vitsy lasa izay, SMPlayer dia nijanona tsy nilalao horonantsary YouTube noho ny fiovan'ny tranokala. Ny kinova fampandrosoana dia efa misy fanamboarana.
Sylpheed, mpitantana mailaka maivana
Tutorial amin'ny Sylpheed, mpitantana mailaka matanjaka izay mandany loharano vitsivitsy, tsara ho an'ny masinina tranainy sy ireo izay te hamaky mailaka fotsiny.
Ahoana ny fametrahana ny blender farany an'ny Blender amin'ny Ubuntu 13.04
Andro vitsy lasa izay dia navoaka ny kinova 2.68 an'ny Blender, ary fotoana fohy taorian'ny 2.68a. Ny kinova farany an'ny programa dia tena mora apetraka amin'ny Ubuntu 13.04.
Amboary ny fifandraisana Interneto amin'ny Namebench amin'ny Ubuntu
Tutorial momba ny fomba hanafainganana ny fifandraisantsika amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny programa namebench sy ny fampiasana ny adiresy DNS izay ampiharina sy ampiasain'ny rafitra misy anay.
Inona ny Grub2 ary ny fomba fanovana azy
Lahatsoratra momba ny Grub2 sy ny fomba fanamboarana azy amin'ny Grub-Customizer fitaovana, fitaovana ahafahanao manova ny Grub2 nefa tsy manam-pahaizana.
Evolution, fitaovana ho an'ny mail anay
Fampianarana sy famelabelarana momba ny Evolution, fampiharana natao hitantanana vaovao, ny fametrahana azy ao amin'ny Ubuntu ary ireo dingana voalohany ao.
Scrot, pikantsary avy amin'ny console
Scrot dia fitaovana ho an'ny Linux mamela antsika haka pikantsary avy amin'ny console. Azavainay ny fampiasana azy sy ny sasany amin'ireo safidiny.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny lisitry ny antontan-taratasy vao haingana ao amin'ny KDE
Na dia tsy misy safidy amin'ny safidin'ny rafitra KDE, ny lisitra antontan-taratasy vao haingana dia azo alefa. Manazava ny fomba.
Whisker Menu na ny fomba fananana menio manokana ao amin'ny Xfce
Tutorial momba ny fametrahana ny Whisker Menu, fampiharana mamela antsika hanana menio azo alamina ao amin'ny Xfce sy Xubuntu.
Fomba 3 hametrahana KDE amin'ny Ubuntu 13.04
Raha mpampiasa Ubuntu 13.04 ianao ary te-hanandrana ireo sehatr'asa sy rindranasa KDE, azonao atao ny mametraka ny KDE amin'ny Ubuntu miaraka amina baiko tsotra iray.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fivoriana ho an'ny vahiny ao amin'ny Ubuntu 13.04
Mora ny manao ny fanjavonan'ny session ho an'ny vahiny ao amin'ny efijery fandraisana an'i Ubuntu, manaova baiko tsotra fotsiny.
Conky Manager na ny fomba fanamboarana ny Conky anay
Tutorial momba ny fomba fametrahana sy fampiasana ny Conky Manager, mpitantana iray ahafahantsika manamboatra Conky nefa tsy fantatrao ny kaody na tsy maintsy tanterahinay ny manamboatra azy.
DockBarX ao amin'ny Xfce, ny fomba fametrahana ny bara Windows 7 ao amin'ny Xfce
Tutorial mahaliana momba ny fomba fametrahana DockBarX amin'ny birao Xfce, ahafahanao manana endrika Windows 7 raha tianao.
Mametraka ny Transmission 2.80 amin'ny Ubuntu 13.04 sy 12.10
Andro vitsy lasa izay dia navotsotra ny Transmission 2.80, iray amin'ireo mpanjifa BitTorrent malaza indrindra amin'ny Linux. Ny fametrahana ao amin'ny Ubuntu dia tena tsotra.
Aerosnap, fiasa mahasoa ho an'ny Lubuntu
Tutorial momba ny fomba hampiasana ny asan'ny Aerosnap amin'ny kinova alohan'ny Lubuntu 13.04 hizarana ny varavarankely misy eo amin'ny birao Lxde.
Indikator Weather, ny toetr'andro ao amin'ny tontonana Ubuntu
Ny famantarana Weather Weather dia mari-pamantarana ho an'ny tontonana Ubuntu izay ahafahantsika mahalala ny toetr'andro misy ny tanànantsika.
Ahoana ny fametrahana Google Chrome amin'ny Ubuntu 13.04
Ny fametrahana Google Chrome amin'ny Ubuntu 13.04 dia tena tsotra, ampidino fotsiny ilay fonosana DEB mifandraika ary apetaho.
Mankany Ubuntu i Munich, ary Espana?
Vaovao mahaliana momba ny fananganana ny Ubuntu avy amin'ny fitondrana alemana eo an-toerana any Munich. Hampiasa Lubuntu izy ireo noho ny fitovizany amin'ny Windows XP
Canonical dia mamorona ny kaonty Ubuntu One, tsy manam-paharoa sy afovoany
Canonical dia hampifantoka ny kaontin'ny mpampiasa serivisy mifandraika amin'ny fizarana azy amin'ny iray, antsoina hoe Ubuntu One Account.
Toa manaraka an'i Ubuntu i Debian
Hevitra momba ny fanavaozana ny Debian 7 farany teo sy ny fomba nametrahan'ny fanovana Debian farany azy io amin'ny làlan'ny Ubuntu.
Indikator Synaps, ny Spotlight ho an'ny Ubuntu ary OS fototra
Indikator Synaps dia mari-pamantarana ho an'ny tontonana Ubuntu sy ny tontonana OS fototra. Azo raisina ho toy ny solon'ny Mac OS X ny Spotlight.
Efijery fidirana ao amin'ny Ubuntu, ny fomba fanamboarana azy
Fampianarana momba ny fomba hanamboarana ny Screen Login araka izay tiantsika sy amin'ny fomba matihanina miaraka amin'ny fitaovana dconf-fitaovana tonga ao Ubuntu
Xfce Theme Manager, mpitantana lohahevitra ho an'ny Xubuntu
Lahatsoratra momba ny Xfce Theme Manager, programa ahafahantsika manova ny lohahevitry ny birao Xfce, noho izany dia tsy ho an'ny Xubuntu sy ny derivatives fotsiny.
Mametraka Google Play Music Manager amin'ny Ubuntu 13.04
Google Play Music Manager dia mamela anao handrindra sy hampakatra ny mozikao amin'ny Google Music. Ny fametrahana azy ao amin'ny Ubuntu 13.04 dia haingana sy mora be.
Ahoana ny fomba hampiasana ny interface web VLC
Torolàlana tsotra manazava ny fomba hampiasana ny sehatr'asa VLC, izay ampiasaina hifehezana ny rindranasa amin'ireo fitaovana sy solosaina hafa.
Rootkits ao amin'ny Ubuntu, ny fomba hahitana azy ireo
Lahatsoratra mahaliana momba ny toerana sy ny fanadiovana ny rootkit an'ny rafitra Ubuntu ary manana rafitra azo antoka kokoa ho an'ny pc.
Galpon Minino fizarana fitaovana taloha vita tany Espana
Lahatsoratra fampisehoana mahaliana sy / na hevitra momba an'i Galpon Minino, tetikasa iray tena mahaliana ho an'ireo ekipa tsy dia manam-bola firy.
Kitendry hitsin-dàlana amin'ny birao Xfce
Tutorial mahaliana momba ny fametrahana ny hitsin-dàlan'ny keyboard amin'ny desktop Xfce, na ho an'ny Xubuntu, Ubuntu miaraka amin'i Xfce na izay derivative an'ny Ubuntu
Fomba ahazoana manome alalana ny fampiharana sasany amin'ny mpampiasa maro
Fampianarana mahaliana momba ny famerana ny fampiharana ho an'ny mpampiasa sasany amin'ny Ubuntu. Mety ho an'ny rafi-panjakana izay misy mpampiasa marobe.
Mpanonta sy kaopy: Ahoana ny fametrahana mpanonta amin'ny Ubuntu
Lahatsoratra mahaliana momba ny Cups sy ny fampiasana azy ireo hametrahana mpanonta ao Ubuntu amin'ny fomba somary sarotra kokoa noho ilay natolotry ny Canonical.
Feedly, mpamaky RSS amin'ny birao anay
Lahatsoratra mahaliana momba ny fametrahana ny app Feedly ao amin'ny birao Unity ary hahafahanao mankafy an'ity mpamaky rss matanjaka ity amin'ny solosainay
Amboary ny menus ao amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fanovana ny lohan-kevitra eo amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Nautilus amin'ny alàlan'ny fampiharana manager file, Nautilus-action.
Fanampiny ho an'ny Lubuntu
Fampianarana hametrahana programa fanampiny sasany ao amin'ny Lubuntu izay manatsara azy tanteraka. Lisitra mihidy toy ny ao amin'ny ubuntu-voafetra-addons ao amin'ny Ubuntu izy io.
Tutorial hametrahana fampiharana amin'ny fanombohana Lubuntu
Tutorial momba ny fametrahana apetraka ao amin'ny startup Lubuntu hanamorana ny fiasa isan'andro ao amin'ny rafitray.
Mametraka birao virtoaly ao amin'ny KDE
Ny manampy, manala ary manamboatra birao virtoaly ao amin'ny KDE dia asa tena tsotra noho ny modely fanaingoana mifanaraka amin'izany.
Compton, fitambaran-varavarankely ao amin'ny LXDE
Compton dia mpitantana famoronana varavarankely maivana natao hampiasaina amin'ny tontolon'ny birao izay maivana ihany koa, toy ny LXDE.
Xubuntu: hitsin-dàlana fitendry hanodina sy hamonoana ny famoronana
Torolàlana tsotra izay manazava ny fomba fampidirana hitsin-dàlana fitendry hahafahana mamela sy manafoana ny famoronana varavarankely ao amin'ny Xubuntu 13.04.
DaxOS, fizarana tanora
Fandraisana manokana momba ny DaxOS, fizarana miorina amin'ny Ubuntu saingy misy fanaingoana be dia be ary eo amin'ny làlana mankany amin'ny fahaleovan-tena izay avy amin'ny Espaniola.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny sary PNG avy amin'ny console
OptiPNG dia fitaovana kely ahafahantsika manatsara ny sarin'ny PNG — tsy misy kalitao very— avy amin'ny console Linux. Tsotra ny fampiasana azy.
Torohevitra sy tetika LibreOffice
Tutorial izay manangona sy manome hevitra momba ireo torohevitra sy tetika fampiasa indrindra hanatsarana ny fampiasana isan'andro ny LibreOffice ao amin'ny rafitra Ubuntu.
Nitro, fampiharana ho an'ny fitantanana ny lahasa amin'ny Linux
Nitro dia fitaovana kely amin'ny fitantanana asa amin'ny Linux, OS X ary Windows. Ny fampiasana azy dia tena tsotra noho ny interface madio sy mahafinaritra.
Alarm Clock, fanairana maranitra ho an'ny Ubuntu
Ny Alarm Clock dia rindrambaiko tena ilaina izay manana famantaranandro fanairana manokana ary koa fameram-potoana, izy rehetra dia azo alamina amin'ny alàlan'ny baiko.
Ahoana ny famongorana Samsung Galaxy S4 avy amin'ny Linux
Fomba fiorenan'ny modely Samsung Galaxy S4 rehetra miaraka amina processeur Qualcomm, ao anatin'izany ireo avy amin'ny AT&T, T-mobile ary Sprint.
Lubuntu 13.04, famerenana "maivana"
Alefaso momba ny Lubuntu 13.04, ny hevitro manokana sy ny zavatra niainako taorian'ny fametrahana an'ity tsiro sy kinova Ubuntu vaovao ity.
Tutorial video momba ny fametrahana Ubuntu 13.04
Mandefasa momba ny tutorial video fametrahana Ubuntu 13.04 ho an'ny zaza vao teraka. Natokana indrindra ho an'ireo vao teraka izay mbola tsy nametraka kinova Ubuntu mihitsy
Ahoana ny fampidirana ireo fampandrenesana Gmail ao amin'ny birao Unity
Ahoana ny fomba hampiasana ny rafitry ny fampandrenesana Gmail ao amin'ny biraon'ny Unity amin'ny alàlan'ny Unity Mail.
Master PDF Editor, mpamoaka PDF feno
Master PDF Editor dia, araka ny anarany, editor PDF tsotra nefa feno miaraka amina karazana endri-javatra sy safidy.
Famirapiratana famantarana, tondro hanova ny famirapiratan'ny efijery
Ny famantarana Brightness dia mari-pamantarana manova ny famirapiratan'ny efijery amin'ny tontonana Ubuntu. Ny fampiasana azy, toy ny fametrahana azy, dia mora be.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny fomba mora ny atiny Google Drive avy amin'ny Ubuntu 13.04
Fampianarana tsotra hahazoana ny atiny rehetra amin'ny kaontinao Google Drive avy amin'ny Ubuntu 13.04 Dash
VNC, ny fampiasana azy ao amin'ny Ubuntu
Fidirana amin'ny fomba fanamboarana ny rafitray hampiasa programa vnc sy hitantanana birao ao Ubuntu lavitra, tsy mila izany ara-batana
Ahoana ny fampifanarahana ny kaonty Google anay amin'ny Ubuntu
tutorial hahafantarana ny fomba marina hampifanarahana ny kaonty Google ao amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fomba hametahana mandeha ho azy ao amin'ny Ubuntu
Tutorial momba ny fomba hametahana ireo singa mandeha ho azy eo am-panombohana ny Ubuntu ho an'ireo fitaovana ilainay ary tsy eken'ny Ubuntu.
Renamer, fanovana anarana vaovao amin'ny rakitra ao amin'ny Ubuntu
Ny rename dia script andoavam-bola ho an'ny nautilus izay manamora antsika ny famerenana anarana anarana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ankavanan'ny totozy.
Mametraka Ubuntu 13.04 amin'ny rafitra miaraka amin'ny UEFI Bios
Midira miaraka amin'ny tutorial video momba ny fametrahana ny Ubuntu 13.04 ao anaty rafitra miaraka amin'ny biolo UEFI sy Windows 8. Aseho ny fampiharana ny fampianarana mitovy amin'izany.
Systemback, fitaovana iray hafa ilaina amin'ny backup ary bebe kokoa ...
Systemback dia rindranasa mamela antsika hamorona teboka famerenana amin'ny laoniny ny rafitra na mamorona CD mivantana an'ny rafitra araka ny ananantsika azy.
MenuLibre, mpamoaka menio feno
MenuLibre dia ahafahantsika manova ireo singan'ny menio amin'ny rindranasa avy amin'ny tontolo iainana toa ny GNOME, LXDE ary XFCE. Izy io aza dia manohana ireo lisitry ny lisitra Unity.
Ny adiresy IP ao amin'ny Ubuntu
Fidirana amin'ny adiresy IP ao amin'ny Ubuntu sy amin'ny ankapobeny hahafahana mifampiresaka sy mahalala ny fifandraisan'ny ekipanay amin'ny tantaran'izao tontolo izao, amin'ny Internet.
Famerenana mandeha ho azy ao amin'ny Ubuntu 13.04
Fampianarana fototra momba ny fomba famoronana backup automatique ao amin'ny Ubuntu 13.04
Ahoana ny fomba hamoronana script fototra
Fanatanjahan-tena azo ampiharina mba hamoronana script fototra manokana ho an'ny fampiasantsika manokana.
Script hametrahana Minecraft amin'ny Ubuntu
Manolotra script tsotra izahay hametrahana Minecraft amin'ny Ubuntu (12.04, 12.10 ary 13.04), izay hamorona launcher misy lisitra haingana ihany koa.
Geary, mpanjifa mailaka tsotra sy kanto
Geary dia mpanjifa amin'ny birao iray tena mora ampiasaina hamakiana ny mailakay noho ny interface tsotra sy kanto.
Avadiho ny fonosana rpm hiadiana amin'ny vahiny
Fampianarana kely momba ny fanovana ireo rakitra rpm ho deb ary hahafahanao mametraka azy ireo amin'ny alàlan'ny baiko vahiny an'ny Ubuntu sy ny terminal.
Ny lisitry ny Repository sy ny loharanom-pahalalana Ubuntu
Entry momba ny repositories Ubuntu. Ahoana ny fomba hanokafana sy hanovana ny rakitra Source.list anay hanana Ubuntu nohavaozina sy azo antoka kokoa.
Ahoana ny fampiasana ny terminal hampidinana horonan-tsary
Fampianarana tsotra izay hanampy antsika hisintona horonantsary avy amin'ny tranonkala mivantana amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny terminal Linux fotsiny
Ny Ubuntu Mobile SDK: Ahoana no fomba hamoronana fampiharana.
Fidirana voalohany amin'ny andiany iray momba ny fomba famoronana rindranasa amin'ny Ubuntu Mobile sdk. Hainay ny mametraka ny sdk, ny ide ary mampivelatra ny Hello World.
Ahoana ny fametrahana modem Movistar USB ao amin'ny Ubuntu
Fampianarana hametrahana sy hanamboarana ny modem Movistar USB ao amin'ny rafitra fiasa Ubuntu, amin'ity tranga ity Ubuntu 13.04.
Mametraka Ubuntu eo akaikin'ny Windows 10
Fampianarana hanovana ny BIOS amin'ny UEFI sy ny fomba fametrahana ny rafitra Ubuntu amin'ny solosaina misy Windows 8 efa napetraka
Ubuntu 13.04, ny fomba hampiasana ny sehatr'asa
Fampianarana fototra ho, ankoatry ny zavatra hafa, hampavitroa ny birao maro ao amin'ny kinova farany an'ny Ubuntu, Ubuntu 13.04.
Ovao ny partitions Ubuntu
Fampianarana iray isaky ny dingana hanovana ny haben'ny fizarazaran'ireo Linux sy Ubuntu, dingana iray tena tsotra nefa mandreraka izay misy azy ireo.
Sublime Text 2, fitaovana tsara ho an'ny Ubuntu
Alefaso momba ny Sublime Text 2, IDE ho an'ny sehatra samihafa toa an'i Ubuntu. Ny tombony ananan'ity IDe ity dia mahatonga azy io ho ilay tian'ny mpamorona maro kokoa.
Ubuntu 13.04, mamorona USB azo alaina miaraka amin'i Yumi (amin'ny horonan-tsary)
Tutorial video momba ny fomba fampiasana Yumi tsara hametrahana Ubuntu 13.04 amin'ny pendrive azo sintomina.
Ahoana ny fomba hamoronana mpampiasa vaovao ao amin'ny Ubuntu
Fampianarana iray isaky ny dingana hamoronana mpampiasa vaovao amin'ny rafitra fiasa Ubuntu.
Ahoana ny fomba famoronana mpandefitra manokana amin'ny Ubuntu
Fampianarana video tsotra azo ampiharina hamoronana mpandefa fanao amin'ny distro Ubuntu Linux eo ambanin'ny birao Unity
Scribus, fitaovana fanontana ao amin'ny Ubuntu
Scribus, programa famoahana ao Ubuntu. Rindrambaiko afaka mamoaka sy mamolavola ary koa afaka manondrana azy ireo amin'ny pdf tsy misy olana
Ny Firewall ao Ubuntu
Alefaso ny momba ny fikirakirana sy ny fampiasana ny Firewall ao Ubuntu ary ny fametrahana sy ny fikirakirana ny interface interface-ny mba hitantanana tsara kokoa an'ity fitaovana ity.
ClamTk: fanadiovana viriosy ao Ubuntu
ClamTk, antivirus loharano misokatra izay mamela antsika hanana antivirus tena tsara ao Ubuntu ary hanana rafitra azo antoka tsy misy fandrahonana
Nautilus Terminal, plug-in raha te hanana konsoly eo am-pelatananao foana ianao
Nautilus Terminal dia plug-in ho an'i Nautilus izay ahafahantsika manana konsole voapetraka ao anatin'ny mpitantana ny rakitra mihitsy.
Fametahana matetika ao Ubuntu
Mandefasa momba ny Frequency Scaling ao Ubuntu, teknika ahafahanao mampihena ny fanjifana solosaina na solosaina finday izay mampiasa azy.
Skrip ao amin'ny Ubuntu
Alefaso ny momba ny famoronana script iray amin'ny rafitra Ubuntu. Nosoratana ho an'ny mpampiasa izay tsy mahalala hoe inona ny script.